Vanotsvaga Sei Injini Kutsvaga, Kukambaira, uye Index Zvemukati Zvako? | Martech Zone
Inotsvaga Sei Injini Kutsvaga, Kukambaira, uye Index Zvemukati Zvako?
Mugovera, October 31, 2020 Mugovera, October 31, 2020 Douglas Karr
Ini handiwanzo kurudzira kuti vatengi vavake yavo yega ecommerce kana zvemukati manejimendi masisitimu nekuda kweese asingaonekwe extensibility sarudzo dzinodiwa mazuva ano - zvakanyanya kutarisana nekutenderera uye kugona kwenzvimbo. Ini ndakanyora chinyorwa pa sei kusarudza CMS uye ndichiri kuzviratidza kumakambani andinoshanda nawo anoedzwa kuti vagadzire yavo yega manejimendi manejimendi.
Nekudaro, pane zvachose mamiriro ezvinhu apo yemaitiro chikuva chinodiwa. Kana iriyo mhinduro kwayo, ini ndichiri kusundidzira vatengi vangu kuti vagadzire iwo anodiwa maficha ekugadzirisa iwo masosi avo ekutsvaga uye enhau enhau, zvakadaro. Pano pane zvinhu zvitatu zvakakosha izvo zvinodiwa.
Chii chinonzi Faira eRobots.txt?
Robots.txt faira - iyo Robots.txt faira iri pachena zvinyorwa faira iri mumidzi dhairekitori resaiti uye inotaurira mainjini ekutsvaga izvo zvavanofanira kusanganisira nekuisa kunze kubva pamhedzisiro yekutsvaga. Mumakore achangopfuura, injini dzekutsvaga dzakakumbirawo kuti iwe ubatanidze nzira inoenda kune XML sitemap mukati mefaira. Heino muenzaniso wangu, uyo unobvumidza ese mabhoti kukamba saiti yangu uye zvakare anovaendesa kune yangu XML sitemap:
Chii chinonzi XML Sitemap?
XML Sitemap - Sezvo HTML iri yekutarisa mubrowser, XML yakanyorwa kuti igaywe zvakarongeka. An XML sitemap inonyanya tafura yemapeji ese pane yako saiti uye payakapedzisira kuvandudzwa. XML sitemaps dzinogona zvakare kuve daisy-dzakasungwa… iyo imwe XML Sitemap inogona kureva kune imwe. Izvo zvakanaka kana iwe uchida kuronga uye kupaza zvinhu zvesaiti yako zvine musoro (FAQs, mapeji, zvigadzirwa, nezvimwewo) mukati mavo maSitepu.
Masamepu akakosha kuitira kuti ugone kunyatsorega injini dzekutsvaga dzizive zvemukati zvawakagadzira uye payakapedzisira kugadziriswa. Maitiro anoshandiswa neinjini yekutsvaga kana uchienda kune yako saiti haashande pasina kushandisa mepu uye zvidhori.
Pasina XML Sitemap, uri kuisa mapeji ako panjodzi kubva pakuzomboonekwa. Ko kana iwe uine chigadzirwa chitsva chinomhara peji iyo isina kubatana mukati kana kunze. Google inoiwana sei? Zvakanaka, isa zvinyoronyoro… kudzamara chinongedzo chiwanikwe kwairi, hausi kuzowanikwa. Nekutenda, injini dzekutsvaga dzinoita zvemukati manejimendi manejimendi uye ecommerce mapuratifomu kuburitsa kapeti tsvuku kwavari, zvakadaro!
Google inowana chinongedzo chekunze kana chemukati kune yako saiti.
Google inonongedza peji uye rinoriisa zvinoenderana nezviri mukati maro uye kuti zvirimo uye hunhu hwesaiti yekunongedzera iri.
Iine XML Sitemap, hausi kusiya kuwanikwa kweako zvemukati kana kukwidziridzwa kweako zvemukati kuti zvive nenjodzi! Vagadziri vakawandisa vanoedza kutora mapfupi anovakuvadza zvakare. Ivo vanoburitsa imwechete yakapfuma snippet pese saiti, ichipa ruzivo rwusina basa neruzivo rwepeji. Ivo vanoburitsa mepu ine iwo iwo madheti pane peji rega rega (kana ese iwo akagadziridzwa kana peji rimwe richigadziriswa), vachipa mitsara kune injini dzekutsvaga dzavari kutamba iyo system kana kusavimbika. Kana ivo havasi kubaya injini dzekutsvaga zvachose… saka injini yekutsvaga haina kuziva kuti ruzivo rutsva rwaburitswa.
Chii chinonzi Metadata? Microdata? Akapfuma Snippets?
Mapfuma akapetwa akanyatso kumakwa microdata izvo zvakavanzika kubva kumuoni asi zvinoonekwa mune peji reinjini dzekutsvaga kana enhau enhau masaiti ekushandisa. Izvi zvinozivikanwa semetadata. Google inoenderana ne Schema.org sechiyero chekusanganisa zvinhu zvakaita semifananidzo, mazita, zvitsananguro… pamwe neakawanda emamwe mazwi anodzidzisa semutengo, huwandu, ruzivo rwekugara, ratings, nezvimwe. Schema ichawedzera pakuonekwa kweinjini yako yekutsvaga uye mukana wekuti mushandisi angobaya kuburikidza.
Facebook inoshandisa iyo OpenGraph protocol (hongu havaigona kufanana), Twitter kunyange ine snippet kutsanangura yako Twitter nhoroondo. Mapuratifomu akawanda uye akawanda arikushandisa metadata iyi kuongorora maratidziro akabatanidzwa uye rumwe ruzivo pavanoburitsa.
Mapeji ako ewebhu ane chirevo chepasi chinonzwisiswa nevanhu kana vachiverenga mapeji ewebhu. Asi injini dzekutsvaga dzine nzwisiso yakaganhurirwa yezviri kukurukurwa pamapeji iwayo. Nekuwedzera mamwe ma tag kuHTML yemapeji ako ewebhu - ma tag anoti, "Hei injini yekutsvaga, ruzivo urwu runotsanangura iyi chaiyo bhaisikopo, kana nzvimbo, kana munhu, kana vhidhiyo" - iwe unogona kubatsira injini dzekutsvaga uye zvimwe zvinoshandiswa kunzwisisa zvirinani zvemukati uye uratidze nenzira inobatsira, inoenderana. Microdata seti yemaki, yakaunzwa neHTML5, iyo inokutendera iwe kuti uite izvi.
Schema.org, Chii chinonzi MicroData?
Ehezve, hapana chimwe cheizvi chinodiwa… asi ini ndinovarumbidza zvikuru. Kana iwe uchigovana chinongedzo paFacebook, semuenzaniso, uye hapana mufananidzo, zita, kana tsananguro inouya… vashoma vanhu vanozofarira uye vobva vatobaya. Uye kana ako maSchema snippets asiri mune yega yega peji, hongu unogona achiri kuoneka mune zvekutsvaga ... asi vakwikwidzi vanogona kukurova kunze kana vaine rumwe ruzivo rwakaratidzwa.
Nyoresa ako XML Sitemaps neKutsvaga Console
Zvakakosha kuti, kana iwe ukavaka zvako zvemukati kana ecommerce chikuva, kuti iwe uve nesystem iyo inotsvaga injini dzekutsvaga, inoburitsa microdata, uyezve ichizopa yakakodzera XML sitemap yezvirimo kana chigadzirwa ruzivo kuti zviwanikwe!
Kana yako robots.txt faira, XML sitemaps, uye zvakapfuma zvimisikidzo zvakagadziridzwa uye zvakagadziridzwa mukati mewebsite yako, usakanganwa kunyoresa kune yega yega injini yekutsvaga yeKutsvaga Console (inozivikanwa zvakare seWebmaster chishandiso) uko iwe kwaunogona kuongorora hutano uye kuoneka kwako saiti pane injini dzekutsvaga. Iwe unogona kutodoma yako Sitemap nzira kana pasina yakanyorwa uye uone kuti injini yekutsvaga iri kuidya sei, kunyangwe kana paine chero nyaya nazvo, uye kunyangwe nzira yekuzvigadzirisa.
Bvisa kapeti tsvuku kunjini dzekutsvaga uye pasocial media uye iwe unowana yako saiti chinzvimbo zvirinani, zvaunopinda pamapeji ekutsvaga enjini yekutsvaga zvadzvanywa kuburikidza nezvimwe, uye ako mapeji akagovaniswa zvakanyanya pasocial media. Izvo zvese zvinowedzera kumusoro!
Marobhoti.txt, Sitemaps, uye MetaData Vanoshanda Pamwe Pamwe
Kubatanidza zvese izvi zvinhu zvakafanana nekubuditsa kapeti tsvuku kune yako saiti. Heino nzira yekukamba iyo bot inotora pamwe nekuti injini yekutsvaga inonongedza sei zvemukati.
Saiti yako ine robots.txt faira iyo zvakare inongedzera yako XML Sitemap nzvimbo.
Yako CMS kana ecommerce system inovandudza iyo XML Sitemap nechero peji uye kuburitsa zuva kana kugadzirisa date ruzivo.
Yako CMS kana ecommerce system inotsvaga injini dzekutsvaga kuti vazive kuti yako saiti yakagadziridzwa. Unogona kuvabaya zvakananga kana kushandisa RPC uye sevhisi senge Ping-o-matic kusundira kune ese akakosha enjini dzekutsvaga.
Iyo Injini Yekutsvaga inodzoka pakarepo, inoremekedza iyo Robots.txt faira, inowana matsva kana akagadziridzwa mapeji kuburikidza nesiti mepu, uyezve inonongedza peji.
Kana ichinongedza peji rako, inoshandisa yakafuma snippet microdata kusimudzira peji rekutsvaga injini.
Sezvo mamwe masayiti akakodzera anobatana nezvako zvemukati, zvemukati zvako zviri nani.
Sezvo zvirimo zvako zvakagovaniswa pasocial media, iro rakapfuma snippet ruzivo rwunotsanangurwa runogona kubatsira kunyatso kuongorora zvirimo uye nekuvatungamira kune rako renhoroondo.
Tags: tsika ecommercesei kutiProtocolmarobhoti.txt fairaschemayekutsvaga konisitemap standardxml sitemap
5 Tech Unyanzvi Mangwana maDhijitari Vashambadzi Vanoda Kudzidzira Nhasi
Maitiro Ekugadzirisa Bhizinesi Rako, Saiti, uye App yeApple Kutsvaga
Nov 3, 2020 pa3: 47AM
webhusaiti yangu haikwanise kudhizaina zvinyorwa zvitsva, ndinotora mepu uye maurls pane webmaster asi zvakadaro handikwanise kugadzirisa izvi. Icho chinetso cheGoogle backend here?
Nov 3, 2020 pa7: 50AM
Kwete kazhinji, ndeipi domain yako? Ndine zvishandiso zvandinogona kuongorora saiti yako nazvo.